Jomo Technology Co., Ltd - Waa in aad waxyaalahaas ka hor iibsiga E-rullebrett ogaado
Power-caawin Kid mooto
Gaadhi curyaanku kick
Is miisaamid mooto
Waa in aad waxyaalahaas ka hor iibsiga E-rullebrett ogaado
Maxaad isweyddiinaysaan waa in la tixgeliyaa? Dabcan ay Safety. Sidaas darteed, waxaan Koowheel rullebrett qeybiyaha korontada helay CE, RoHS, shahaadooyinka FCC UN38.3. Just sida baabuur ama bushkuleeti, kuwaas rullebrett korontada intaasi dheer waa in wax xunna-hayo la ujeedka lagu doonayo in ay maamulaan macaan. Haddii ay u badan tahay in uusan u eg kasta oo ka mid ah rullebrett korontada oo aad u soo aragnay ilaa hadda. Isku fikrad haatan sidoo kale khuseysaa xitaa in arimaha sida rullebrett, saamaxdo Skaters tahay inaan sameeyo waxyaalo qaar ka mid ah ay aysan heli karin on board caadi ah, sida fuushan taag. By hadda waxaan hubaa in aad qiyaasay in this skeidgareeyo gaar ah ayaa baabuurta yar gudaha waxaa ka mid ah. Baytariyada, si kastaba ha ahaatee, u muuqdaan in ay si kastaba ha ahaatee waxay noqon arrin la yareeyo si aqlabiyad ah lagu skeidgareeyo korontada moodadanaqshado. Hore, macaamiisha, kuwaas oo ay ogaadeen in ay skeidgareeyo korontada ka soo horjeedaa sharciga noqon lahayd in safarka ee jidka la joojiyay ay Siidalbo. Roto-band qeybiyaha skeidgareeyo ( Koowheel brand) ayaa sheegay in ay, ugu dhaqsiyaha badan, oo inta badan lagu skeidgareeyo ku daaraysaa ka xoogbadan, korontada caalamka. Halkan waxaan ku siiyaan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loo isticmaalo rullebrett korontada si ammaan ah.
Waxaa jira qaar ka mid ah run ahaantii rullebrett korontada qabow suuqa iyo wax yar oo ka mid ah ay yihiin kuwo ku ingeniously horumariyo. Waxaa jira rullebrett. Range - Haddii socdaalka in ay ka shaqeeyaan ama awood keliya qaadataa toban daqiiqo ka dibna aad uma waa in arin kasta waxaa la tan iyo rullebrett ugu dabooli karo this on kharashka hal. Iyada oo ku saleysan laba PALs skater kuwaas oo la go'aamiyey in ay ka lagu skeidgareeyo fiican korontada meerahaas, Guddiyada Koowheel yihiin madaxda waaxda of rullebrett korontada. Guddiga Tani ma la yaab leh si fiican on dhul-jid off ah, wax ka qabashada arrimaha loox oo kala duwan oo aan xitaa ku riyoon karo si sahlan. Caadi ahaan mid ka weyn motor KV hoos u dhac ku filan tahay, waxa ay ahayd in ay dhacdo iyo climes hills aan aad si sax ah iyo waa doorasho ka raqiisan. Waa maxay aad ka fikirto sidii hore ka badan adeeganaya ka mid ah? waa skeidgareeyo dhaqsiyaha korontada , waxa ay sidoo kale waa mid aad u qabow. Sidee waxaa si fudud? Waxaa suurto gal ah waxaa laga yaabaa in ay gaaraan orod ah oo ilaa 30 km / h iyo si wadajir ah ula baakada batari badeli, 2pcs baakad batteriga wuxuu socon karaa 60km, tag dheer.
Waa maxay hab wax ku ool si loo ogaado mid ka mid ah lagu skeidgareeyo fiican korontada for fuula, caruurta iyo dadka waaweyn? Creech kale oo uu kuu sheegayaa skeidgareeyo korontada this waxaa loogu talagalay dadka waaweyn waa tamarta qiimeeyo wax soo saarka ee motor ah. Waa skeidgareeyo elektaroonik ah oo la siiyo motor koronto kaasi oo loo adeegsaday by fog. Fog waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan, si kastaba ha ahaatee waxaa sahlan in ay ku shaqeeyaan. The maamulka fog si sahlan loo isticmaalo fasaxa dardargelinta a fudud - iyo xataa ka dhigan tahay in aad la iilanin karaa in hab gadaal!
waqti Post: Mar-09-2018
Waad ku mahadsan tahay TIME
Block 1, No.1 ChiTian East Road, BaiShigang Village, ChangPing Town, Dongguan City 523570, Shiinaha (40000 ㎡)